2 Makoronike 35:1-27
35 Josiya+ akabva aitira Jehovha paseka+ muJerusarema, vakauraya chibayiro chepaseka+ pazuva rechigumi nemana+ romwedzi wokutanga.+ 2 Naizvozvo akagadza vapristi kuti vatarisire zvinhu zvavaifanira kutarisira,+ akavakurudzira+ kuita basa reimba yaJehovha.+ 3 Akati kuvaRevhi, vaiva varayiridzi+ vevaIsraeri vose, vaya vakanga vari vatsvene vaJehovha: “Pinzai Areka tsvene+ muimba+ yakavakwa naSoromoni mwanakomana waDhavhidhi mambo waIsraeri; uye haizovizve mutoro pamapfudzi enyu.+ Zvino shumirai+ Jehovha Mwari wenyu nevanhu vake vaIsraeri. 4 Gadzirirai maererano nedzimba dzemadzitateguru+ enyu nemapoka enyu,+ maererano nezvakanyorwa+ naDhavhidhi mambo waIsraeri uye maererano nezvakanyorwa+ nomwanakomana wake Soromoni. 5 Mirai+ munzvimbo tsvene maererano nemapoka edzimba dzemadzitateguru nokuda kwehama dzenyu, ivo vanakomana vevanhu, uye ngapave nechikamu chedzimba dzemadzibaba+ chevaRevhi.+ 6 Muuraye chibayiro chepaseka,+ muzvitsvenese,+ mugadzirire hama dzenyu kuti muite maererano neshoko raJehovha rakapiwa pachishandiswa Mosesi.”+ 7 Zvino Josiya akapa vanakomana vevanhu mapoka ezvipfuwo, makwayana makono nembudzana hono, zvaisvika zviuru makumi matatu, zvose kuti zvive zvibayiro zvepaseka nokuda kwavose vakanga varipo, uye akapawo mombe zviuru zvitatu.+ Zvose izvi zvakabva pazvinhu zvamambo.+ 8 Machinda+ ake akapawo mupiro kuti uve chinopiwa chokuzvidira nokuda kwevanhu,+ vapristi uye vaRevhi. Hirikiya+ naZekariya naJehieri zvavaiva vatungamiriri veimba yaMwari wechokwadi vakapa vapristi zvibayiro zvepaseka zvine zviuru zviviri nemazana matanhatu, nemombe mazana matatu. 9 Konaniya naShemaya naNetaneri hama dzake naHashabhiya naJeyieri naJozabhadhi, vakuru vevaRevhi, vakapa vaRevhi zvibayiro zvepaseka zvine zviuru zvishanu, nemombe mazana mashanu. 10 Basa racho rakagadzirirwa,+ vapristi vakaramba vakamira+ panzvimbo dzavo,+ uye vaRevhi vari mumapoka avo,+ maererano nomurayiro wamambo.+ 11 Vakauraya chibayiro chepaseka,+ vapristi+ vakasasa+ ropa ravakagamuchira kubva pamaoko evaRevhi, vaRevhi pavakanga vachivhiya.+ 12 Vakagadzirirawo zvinopiwa zvinopiswa kuti vazvipe mapoka+ acho maererano nedzimba dzemadzibaba,+ kuvanakomana vevanhu, kuti vape+ zvinopiwa kuna Jehovha maererano nezvakanyorwa mubhuku raMosesi;+ uye vakaitawo saizvozvo nemombe dzacho. 13 Vakabika+ chinopiwa chepaseka+ pamoto maererano netsika yacho; uye vakabikira zvinhu zvakaitwa zvitsvene+ muhari dzokubikira nomumakate nomuhadyana, vachibva vakurumidza kuuya nacho kuvanakomana vose vevanhu.+ 14 Pashure peizvi vakazvigadzirira ivo nevapristi,+ nokuti vapristi, ivo vanakomana vaAroni vakanga vachipa zvibayiro zvinopiswa+ nemafuta+ kusvikira usiku, uye vaRevhi vakazvigadzirira+ ivo nevapristi, vanakomana vaAroni. 15 Vaimbi,+ ivo vanakomana vaAsafi+ vaiva pabasa ravo maererano nomurayiro waDhavhidhi+ nowaAsafi+ nowaHemani+ nowaJedhutuni+ muoni+ wamambo; uye vachengeti vemagedhi+ vaiva pamagedhi akasiyana-siyana.+ Pakanga pasina chikonzero chokuti vabve pabasa ravo, nokuti hama dzavo vaRevhi dzakavagadzirira.+ 16 Basa rose raJehovha rakagadzirirwa pazuva iroro kuti vaite paseka+ nokupisira zvinopiwa zvinopiswa paatari yaJehovha, maererano nomurayiro waMambo Josiya.+ 17 Zvino vanakomana vaIsraeri vakanga varipo vakaita paseka+ panguva iyoyo pamwe chete nomutambo wemakeke asina kuviriswa kwemazuva manomwe.+ 18 Kwakanga kusati kwamboitwa paseka yakaita saiyoyo pakati paIsraeri kubvira pamazuva omuprofita Samueri,+ uye hakuna mumwe mambo+ chero upi zvake waIsraeri akanga amboita paseka yakafanana neyakaitwa naJosiya nevapristi nevaRevhi nevaJudha vose nevaIsraeri vakanga varipo nevagari vomuJerusarema. 19 Paseka iyi yakaitwa mugore rechigumi nemasere rokutonga kwaJosiya.+ 20 Pashure peizvi zvose, Josiya paakanga agadzira imba yacho, Neko+ mambo weIjipiti+ akauya kuzorwa kuKakemishi+ pedyo norwizi rwaYufratesi. Josiya+ akabva aenda kunosangana naye.+ 21 Iye akabva atuma nhume kwaari, achiti: “Ndineiko newe, haiwa iwe mambo waJudha? Nhasi handina kuuya kuzorwa newe, asi kuzorwa neimwe imba iya yakarayirwa naMwari kuti ndiinyonganise. Rega hako kuti zvikunakire nokuda kwaMwari, iye aneni, uye usaita kuti akuparadze.”+ 22 Kunyange zvakadaro Josiya haana kufuratidza chiso chake kuti abve kwaari,+ asi akaita kuti arege kuzivikanwa+ kuti arwe naye, uye haana kuteerera mashoko aNeko+ akabva mumuromo maMwari. Naizvozvo akaenda kunorwa mubani reMegidho.+ 23 Zvino vapfuri+ vakapfura Mambo Josiya, zvokuti mambo akati kuvashandi vake: “Ndiburutsei, nokuti ndakuvadzwa kwazvo.”+ 24 Naizvozvo vashandi vake vakamuburutsa mungoro, vakamukwidza mungoro yake yehondo yechipiri, vakaenda naye kuJerusarema.+ Nokudaro iye akafa,+ akavigwa munzvimbo yemakuva emadzitateguru ake;+ uye vaJudha vose neJerusarema vakachema+ Josiya. 25 Jeremiya+ akatanga kuimba+ pamusoro paJosiya; uye vaimbi vose vechirume nevaimbi vechikadzi+ vanoramba vachitaura nezvaJosiya munziyo dzavo dzemariro kusvikira nhasi; uye vakaita kuti zviitwe murau kuna Israeri, uye tarirai zvakanyorwa panziyo dzemariro.+ 26 Zvimwe zvose zvakaitwa+ naJosiya nemabasa ake omutsa worudo,+ maererano nezvakanyorwa mumutemo+ waJehovha, 27 nemabasa ake, okutanga neokupedzisira,+ tarirai zvakanyorwa muBhuku+ reMadzimambo aIsraeri naJudha.